China Knitting Machine Ezé Belt Nlụpụta na ụlọ ọrụ | Igwe Morton
Ngwa igwe ụdịdị European Classic
Ahịrị Atọ Atọ
Jacquard ugboro abụọ
Igwe oghere obosara okpukpu abụọ
Ngwaọrụ European Version
Ugboro abụọ Jersey
Multifunctional elu ikpo
Lower loop ịkpụ oghe obosara jacquard
nnukwu ikpo oghere obosara jacquard
Asia Version igwe
Akpa ajị anụ atọ
Otu obosara mepere emepe
Jacquard na -alụbeghị di
Naanị Jacquard Striper
Ogo ahụ okpukpu abụọ
Ogologo obosara okpukpu abụọ
Jacquard Striper ugboro abụọ
Enweghị nsogbu Machine
Okirikiri Knitting Machine Parts
Onye na -ete mmanụ
Ụgbọ elu & Ọkụ mmanụ
Kposara & erughị ala
Ndị na -egwu mmiri
Onye ahịa na -eleta
Knitting Machine Ezé echebe
Ị na -achọ akwa ike igwe na -ejikọ akwa akwa belt?
Mgbe ahụ ị bịarutere ebe kwesịrị ekwesị.
Ị nwere ike ịhụ ike dị elu & akwa igwe na -eyi akwa ebe a.
Ọnụ ego ọrụ: USD 2-3.5 kwa mita
Nkeji nke obere: 10 mita
Tụkwasịnụ Ikike: 35000 PC kwa afọ
Ịkwụ Ụgwọ Okwu: T/T
1.Excellent belt dị mma maka igwe ịkpa akwa okirikiri.
2.Ọ dịghị mkpọtụ, mgbochi satic, nguzogide mmanụ, iguzogide ọkụ.
3.Higher Ike pụrụ iche eriri maka akwa okirikiri akpa igwe.
Morton belt belt na-eji teknụzụ eriri eriri pụrụ iche na-enweghị ntụpọ, ike Kevlar dị elu nwere ike ndọda siri ike, ọnụọgụ ike ọgwụgwụ dị elu na enweghị ihe ịgbatị ahụ.
A na-ahọrọ akụrụngwa polyurethane niile na-ebubata iji hụ na akwa na-eguzogide eriri, obere mkpọtụ na enweghị mmezi.
Belt Morton nwere ikike mgbochi dị elu, nkwụsi ike ọrụ dị elu, yana ogologo ndụ. Ọ dabara maka igwe ịkpa akwa okirikiri na ụlọ ọrụ akwa, ụlọ ọrụ akwụkwọ na ụlọ ọrụ nri. Ngwaahịa ahụ ka na-ejigide ikike ịrụ ọrụ dị mma na nnyefe dị oke ibu. Ọ na -akwado njikọ mgbanaka, enwere ike ijikọ ya n'ogologo ọ bụla.
ỤLỌ ọrụ na -arụ ọrụ nke oge:
A na -ekekọta eriri eriri oge nwere eriri na -adịghị agwụ agwụ nke nwere ezé dị n'ime elu ime ime yana pulley nwere ezé kwekọrọ na ya. Mgbe ọ na -arụ ọrụ, eriri ezé eriri na -eji oghere ezé nke pulley na -ebugharị mmegharị na ike. Ụdị ọkwọ ụgbọ ala ọhụrụ nwere uru nke nnyefe na nnyefe akụrụngwa.
Kpachara anya maka nrụnye na iji eriri oge na wiil oge:
Belata ebe dị anya n'etiti pulley. Ọ bụrụ na e nwere ihe nhịahụ, a ga -ebu ụzọ tọpụ ya, wee doziezie etiti etiti mgbe ịwụnye eriri. Maka nnyefe nwere ogologo etiti etiti, ekwesịrị ibu ụzọ wepu pulley, mgbe ahụ etinyere eriri na pulley, emesịa etinyere pulley na oghere iji dozie ya.
Nke gara aga: Knitting Machine Nchekwa Feeder
Osote: Sistemu mmanụ
China Best okirikiri Knitting Machine Parts
China okirikiri Knitting Machine Parts
Okirikiri Kniting Machine Ezé echebe echepụta
Akụkụ Ntucha Akụkụ Ngwa Nrụpụta
Okirikiri Knitting Machine mapụtara Parts
Okirikiri Knitting Machine mapụtara Parts Nlụpụta
Okirikiri Knitting Machine Ezé echebe
Okirikiri Knitting Machine timing Belt
Dị iche iche okirikiri Knitting Machine Parts
Ịkwọ ụgbọala echebe N'ihi Kniting Machine
Knitting Machine Akụkụ
Knitting Machine mapụtara Parts
Knitting Machine mapụtara Parts Maka Sale
Long Life echebe Factory
NO.20, QIAOXIN ROAD, SHUANGYANG MAGA, LUOJIANG DISTRICT, QUANZHOU OBODO, FUJIAN CHINA CHINA. 362012.
ACHỌRỌ M YA!